Habeenka quruxda badan | Iskaashiga | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Habeenka quruxda badan | iskaashi
Bogag badan oo ku saabsan iskaashiga
Galmada, eroticism iyo iftiinka
Haddii ka dib guursad guuleysta iyo wajiga dambe ee fashilka ugu horeeya, nolol maalmeedka si tartiib tartiib ah ayey u koraan gacanta sare, waqtiyada jaceylka caadiga ahi waa muhiim. Mid ka mid ah ama habeenkii kale ee jaceylka ahi waxay hubin kartaa in jacaylku aanu huruddo. Hase yeeshee, dhowr diyaaradood ayaa horayba ku filan - walbahaarka waa inuusan kicin.
Sida loo abuuro fiidkii jacaylka - si loo abuuro wadajir
Haddii ay carruurtu joogaan guriga, fiidkii jaceylku weli waa suurtogal. Haddii aad haysato fursad aad carruurta siiso ilmo ilaaliye wanaagsan habeenkii ama si ilmaha u sii daaya saaxiibo hurdo leh, fiidkii waxaa lagu raaxeeyaa raaxo.
Si kastaba ha ahaatee, carruurta yaryar, si kastaba ha ahaatee, la'aanta ilmo ilaaliye ah habeenkii jaceylka ah ma aha wax caadi ah. Kadibna, waxay sariirta u seexdaan waqti hore, sidaas awgeed jacaylka ayaa markaa ka dib imaanaya. Markaa markaa maahan waqti aad u badan oo ku saabsan jidka, waa inaad sameysaa diyaarinta horay.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay habeenkii jaceylka
Qof kastaa maahan fikrad la mid ah jacaylka. Muusikada iswada leh iyo iftiinka khafiifka ah waa muhiim. Shumacyada, hubso in aysan jirin wax khatar ah oo dab ah. Nidaal kale oo bixiya laydh. Shumacyada LED-yada cusub ayaa sidoo kale bixiya iftiin jilicsan, laakiin maaha qof walba dhadhankiisa.
Fikradda wanaagsan ee loogu talagalay fiidnimada jaceylku waa casho ladhan leh laba. Iyadoo shamaca iyo galaas wanaagsan oo khamri ah si degdeg ah u yimaado jawi quruxsan. Miis aad u wanaagsan oo si wanaagsan loo dhigay ayaa si dhakhso ah u abuura nolol maalmeedka oo dhan.
Haddii aadan rabin inaad wax karsato, laakiin sidoo kale fiidkii oo ku habboon fadhiga fadhiga waa sax. Iyada oo la soo gaabiyo iftiinka, qurxinta quruxda badan, cabitaan ku habboon iyo wax yar oo nibble ah, waxaad ku bilaabi doontaa bilawga wanaagsan habeenkii jaceylka. Haddii aad tahay xariifin, hadal, dhegeysi muusig ama daawashada DVD waa arrin shakhsi ahaaneed.
Habeen madadaalo ah oo lala yeesho lammaanaha
Haddii ka dib guursad guuleysta iyo wajiga dambe ee fashilka ugu horeeya, nolol maalmeedka si tartiib tartiib ah ayey u koraan gacanta sare, waqtiyada jaceylka caadiga ahi waa muhiim.
Sidaa daraadeed niyadda jaceylku maaha mid calaamad u ah, waa inaad iska ilaalisaa dhibcooyinka. Waa inaadan ka hadlin dhibaatooyinka iyo walwalka. Dib u dhigista macnaheedu maaha in la hakiyo - waxaa jira waqti loogu talagalay maalin kale.
Si dhunkasho ay ula kulanto jacayl, neefta xun waa in laga fogaadaa. Cunto leh toonta ama basasha waa inaysan ku jirin liiska. Xaalad xun, waxa kale oo ay noqon doontaa wax yar oo leh habeenkii jacaylka. Haddii tani aysan waqtigu noqon karin, waa inaad si fiican u dhaqaaqdid.
Aad bay muhiim u tahay wakhti go'an, sidaas darteed fiidkii wuxuu bilaabi karaa runtii raaxo iyo walbahaar la'aan. Shaqada saacadaha dheeraadka ah way ka fiican tahay maalin kale.
Iyo haddii wax dhab ahaantii u yimaadaan ama u baddelaan niyadda, waa in aanad dabin kicin. Fursad cusub oo loogu talogalay habeenkii jaceylka ayaa si dhakhso ah dib ugu soo noqon doona.
Ma jeclaan lahayd?
Farqiga da'da ee xiriirka
Arrimaha go'an tahay
La jirtaa saaxiibtinimo ama saaxiib
Kufsi la xidhiidha - waxyeelo soo gaadhay
Cilaaqaadka isku-jinsiga ah
Caawin, waan khiyaaneeyey
Talooyinka Wedding Planner & Info for arooska guusha
Iskaashiga - isbedelka carruurta?
Hooyo iyo aabe fasaxa oo aan lahayn carruur
Oh, qaali ah, Maalinta Jacaylka
Gabayada Erotic ah ee saaxiibtinimo ama saaxiib
Cuntada qalalan ee laba
Cuntada loo yaqaan 'erotic cats' for two
Maalmaha fasaxa ah ee raaxeysiga
Maxay magacyada xayawaanka ka dhigan yihiin?
Sheeko jacayl ah - jacayl iyo walaac
Sheeko qosol - adiga iyo aniga
Marka saaxiibka ugu fiican uu noqdo jacayl
Noqo waalid - joogista jacaylka
Khamriga sida aphrodisiac
Jinsiga ah nolol maalmeedka
Qubeysiga lala socdo saaxiib ama saaxiibbo
Qubeysi la qaado saaxiib ama saaxiib
Nudity nolol maalmeedka
Indho-caddayn - Sidee u xajistaa?
Qaab-dhismeedka iyo shaqada naasaha dumarka
Dumarka dumarka iyo khuraafaadka
Talooyinka galmada ee khabiirada
Masturbateka xiriirka = khiyaano?
Kaalinta ciyaarista iyo galmada
Soulsex - rabitaan cusub ee lammaanaha
Galmada dib u heshiisiinta - waa in ay shaqeysaa?
Haweenka boggooda midab-erotic ah
Rootiga Roots Pages Ragga & Lamaanayaasha
Yoga bogaga midabaynta erotic
Sawir-hawleed ayaa sharaxday tallaabo tallaabo
Miyaad mowduucyo ku saabsan shuraako iyo jinsi? Kala hadal annaga.
Talooyinka beerta - Jannada Romantic
Walaaca xajmiga ah | iskaashi
Sabtida quruxda badan | Iskaashiga jaaliyada
Xiriirka lamaanaha | Inaad la wadaagto iskaashi
Wada xaajoodka lala yeesho lamaanaha | Iskaashiga qashinka